विजेता बने भरतमणि पौडेल – Phalaicha Khabar
२०७८ आश्विन ३, आईतवार ११:३२
काठमाडौं । कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ को उपाधि भरतमणि पौडेलले जितेका छन् । आज राति भएको ग्रान्ड फिनालेमा उनले बाजी मारेका हुन् ।
फाइनलमा पुगेका भारत सिक्किमका बिक्की अग्रवाल र गोरखाका कमेडियन सन्तोष थापालाई पनि पार्दै ताप्लेजुङका भरतमणिले कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ को उपाधि उचालेका हुन् । उपाधिको टाइटलसँगै उनले कार र २५ लाख उपहार पाएका छन् ।
फष्ट रनरअप बिक्की अग्रवाल बने भने सेकेन्ड रनरअप सन्तोष थापा बनेका छन् । फष्ट रनरअप र सेकेन्ड रनरअपले क्रमशः मोटरसाइकल र स्कुटर पाएका छन् ।
भरतमणिलाई नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको साथ थियो ।
गत सिजनमा प्रत्यक्ष साथ नदिएका नेताहरुले यो पटक भने खुलेरै आफू निकट प्रतिभालाई साथ दिएका थिए । आ–आफ्ना जिल्लाका नेताहरुले प्रतिस्पर्धीलाई साथ दिएका हुन् । गगनले भने आफू सञ्चालक समितिमा रहेको कलेजको विद्यार्थी भएकाले भरतमणिलाई सहयोग गर्ने बाहना मिलेको बताएका थिए । भरतमणि जिपी कोइराला मेमोरियल कलेजका विद्यार्थी हुन् ।
गोरखाका सन्तोष थापालाई पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको साथ थियो । सिक्किमका बिक्की अग्रवाललाई मुख्य मन्त्री प्रेम सिंह तामाङको साथ थियो । बिक्कीलाई मुख्य मन्त्री तामाङले ६ लाख आईसी दिएर सेमिफाइनल अगाडि नै भोटका लागि सहयोग गरेका थिए । पछि फाइनलका लागि पनि भोटको क्याम्पेनिङमा उनले सहयोग गरेका थिए ।
भरतमणिलाई योगेशले यसअघि नै आफ्नै पहलमा ६ लाख रुपैयाँको पुरस्कारको घोषणा गरिसकेका थिए । उक्त पुरस्कार कमेडी च्याम्पियनको सेटबाट बाहिर आएपछि हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ ।
कमेडी च्याम्पियनको पहिलो सिजनको विजेता हिमेश पन्त बनेका थिए । शोको निर्णायकमा सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, ऋचा शर्मा र प्रदीप भट्टराई थिए । शो निर्देशन विशाल भण्डारीले गरेका थिए ।
बाह्रखरी अनलाइनबाट साभार
दमक | कोरोना महामारीअघि हरेक वर्षको दशैंमा फिल्म रिलिज गर्न निर्माताबीच हानाथाप हुन्थ्यो । किनकि, दशैं विदा फिल्म रिलिजका लागि सबैभन्दा राम्रो समय हो ।
दमक | विभिन्न चाडपर्वहरूको महत्व र गरिमालाई ती चाडपर्वहरू सम्बन्धी बनेका गीतसंगीतहरूले झन माथि उठाउने र आकर्षित गर्ने गर्छन् । नेपालमा पनि विशेष गरेर तीज,
कथा “साला पहाडमे क्या हे ?” सायद पहाडमा जीवनको इन्द्रेणी सपनाहरू फुल्ने सम्भावना नदेखेरै हुन सक्छ, मानबहादुर र उनको भाइ टेकबहादुरले ‘साला पहाडमे क्या हे”
क्षितिजमा मधुरो आवाजमा एउटा गित बज्छ “माछी मार्न जाऊँ न दाजै काला पानीमा” हाम्रा घरका २ जना नानीहरू छोरी बिनिषा र छोरो शिशिर त्यो क्षितिजमा
दमक | गायक सुरेश धिमालको दोस्रो गीत रिलिज भएको छ । म‌ंगलबार उनको ‘गाजलु आँखाको’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो युट्यबमार्फत सार्वजनिक भएको छ । यसअघि
तिमीले असार पन्ध्रका अनेकन् परिकार सजाएर अरुले ठिक्क पारेकाे हिलाेमा सुसज्जित सजिएर सेल्फी खिचेर पाेेष्ट गरेपछि मैले पनि सम्झिएकी हुँ असारकाे चटाराे। साँच्चै असार त
पहिला–पहिला आमा रातभर कोल्टे फेरिरहनु हुन्थ्यो चुर खाइरहनु हुन्थ्यो एक्लै मनसगँ बात मार्दै बरबराइरहनु हुन्थ्यो पट्यार लाग्दा रातहरुलार्इ कहिले ओख्लीभरि कुट्नु हुन्थ्यो कहिले जातोभरि पिस्नु
गीत-सङ्गीत र साहित्यका यी मूर्खहरू नभए नेपालको अस्तित्व के हुन्थ्यो ? -सुरेश अधिकारी
म मान्छु सरकारले विकासको काम अत्यन्तै तिब्र रुपमा अगाडि बढाएको छ । तर नेपाली भाषा सस्कृतिको सार्वभौमिक अस्तित्वलाई विश्वमा बुलन्द बनाउने नेपाली स्रष्टाहररूको अस्तित्व रक्षा
डा. सुदीप भट्टराईको धमाकेदार नृत्य गीत
दामक | केटोको प्रस्तावको प्रतिक्रियामा ‘नाई नाई नाई’ को जवाफ मात्र आएपछि झापाली केटो केटी फकाउने जुक्ति निकाल्न नसकेर अलमल्लियो । कुरा हो ‘नाइ नाइ